Fianarantsoa : tovolahy iray maty voatsatoka antsy in-21 | NewsMada
Fianarantsoa : tovolahy iray maty voatsatoka antsy in-21
Hitan’ny olona teny an-dalana ny fatina tovolahy iray nihosin-dra, tany Isorana, distrika Fianarantsoa, omaly maraina. Feno dian’antsy miisa 21 teny aminy tamin’ny nahitana azy. Avy namonjy tsena tany amin’ny kaominina Isorana ity tovolahy ity, raha ny vaovao avy any an-toerana. Nahitana kitapo kely efa foana teo akaikiny. “Mety ho nisy nanafika izy, na koa valifaty”, hoy ny olona tany an-toerana. Tonga tany an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny fizahana ny razana. Tsy mbola fantatra ny nahavanon-doza. Voalaza fa mponina avy amin’ny fokontany hafa ilay tovolahy io fa tsy avy any Isorana.
Niteraka tahotra ho an’ny mponina any an-toerana ity tranga ity. Anisan’ny faritra mena amin’ny asan-dahalo mantsy any ka heverin’ny olona fa asan-dahalo izao. Efa mandray an-tanana ny raharaha ny zandary.
Tsy ny any Fianarantsoa ihany no itrangana asan-jiolahy arahina habibiana tahaka izao fa hatrany Antsiranana ihany koa. Mpiambina iray maty novonoin’ny jiolahy tany Ambohimitsinjo Antsiranana, ny alakamisy lasa teo. Iray hafa naratra mafy vokatry ny fanafihana. Araka ny vaovao avy any an-toerana, enin-dahy nanao saron-tava ireo nanafika tokantrano iray. Vao tafiditra ireo olon-dratsy, namira antsy ireo mpiambina roa lahy. Maty tsy tra-drano ny iray, ary voa mafy koa ilay namany. Taitra ny tompon-trano raha vao naheno ny tabataba ka niantso vonjeo. Nitsoaka ireo jiolahy, noho izany, ka tsy nahazo na inona na inona. Tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny famotorana sy nanao ny fanarahan-dia, saingy tsy tratra ireo jiolahy.